Kuhlonishwe imbokodo ekhubazekile | Isolezwe
Kuhlonishwe imbokodo ekhubazekile
Isolezwe / 6 September 2012, 11:34am / MBALI KHANYILE
KUSUKELA kwesobunxele owayeyiMeya yaseMsunduzi uNkk Zanele Hlatshwayo noNksz Bulelwa Mbolekwa owemukela indondo yakhe kuNdunankulu waseKZN Dkt Zweli Mkhiz. Isithombe: ZANDILE SHANGE
ABANTU abakhubazekile kumele babambe iqhaza ekuthuthukiseni umphakathi ngezindlela ezehlukene.
Lokhu kushiwo nguNksz Bulelwa Mbolekwa (38) wasePinetown ongaboni emehlweni nongomunye wabantu besifazane abangu-12 abathole izindondo zokuhlonishwa kwabesifazane abaphila nokukhubazeka.
Lo mcimbi wokuhlonishwa kwembokodo ephila nokukhubazeka okwehlukene obizwa nge-Tributes obusuhlelwa okwesithathu, ubusehholo iJewish, eThekwini, ngoLwesihlanu.
UNksz Mbolekwa uthe ukholwa wukuthi lo mcimbi uzokwenza ukuthi abantu babone ukubaluleka kwabantu abaphila nokukhubazeka njengoba iningi labantu abangakhubazekile lihlezi libadabukela abantu abanjengaye.
“Ukuthola le ndondo kusho lukhulu kimina njengoba bengingeke ngiyithole uma ngabe kuthiwa awubonakali umsebenzi engiwenzayo emphakathini. Ngikholwa wukuthi nalabo abasebasha kunathi abaphila nokukhubazeka bazogqugquzeleka ekutheni bavule izikhungo ezisiza umphakathi ngezindlela ezahlukene,” kubeka uNksz Mbolekwa oyiDeputy Manager eMnyangweni wezeMpilo Kwa-Zulu Natal.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uDkt Zweli Mkhize ugqugquzele abebehambele lo mcimbi nabebehlonishwa.
“Umyalezo esizama ukuwudlulisa emphakathini wukuthi ubone igalelo abanalo abantu besifazane abaphila nokukhubazeka. Sikholwa wukuthi ukuqhakanjiswa komsebenzi wabo omuhle abawenzayo emphakathini kusemqoka njengoba iningi labo likwezamabhizinisi nasezikhungweni ezahlukene ezisiza umphakathi,” kusho uMkhize.
Phakathi kwemikhakha abaqokelwe yona laba bantu besifazane abangu-12 abathole izindondo zokuhlonishwa, kubalwa owe-Human Resources Development, Public Sector, Business, Sport and Recreation, Education, Community Development, Leadership, Science and Technology, Creative Arts, Mother of Child, Girl-child nePosthumous Tributes.
UMnuz Musa Zulu oyinxusa leTributes, uthe ukholwa wukuthi bonke abantu asebalahla ithemba abaphila nokukhubazeka bangagqugquzeleka uma kungase kubanjiswane ekuqhakambiseni umsebenzi owenziwa ngabantu abaphila nokukhubazeka.